Tababare Solskjær oo ka hadlay qorshahooda suuqan xagaaga, kaddib imaatinka Aaron Wan-Bissaka iyo Daniel James – Gool FM
Tababare Solskjær oo ka hadlay qorshahooda suuqan xagaaga, kaddib imaatinka Aaron Wan-Bissaka iyo Daniel James
(England) 06 Luulyo 2019. Macalinka Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay inuu wali ka shaqeenayo heshiisyada cusub ay kooxda kaga baahan tahay suuqan xagaaga.
Macalinka reer Norway ayaa xaqiijiyay in saraakiisha kooxda Red Devils ay si weyn kaga caawin doonaan qorshihiisa suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
United ayaa ilaa iyo haatan kala soo saxiixatay suuqan xagaaga, Daniel James oo ay kasoo qaadatay Swansea City, iyo Aaron Wan-Bissaka oo isna kaga soo biiray Crystal Palace.
Hadaba Macalinka kooxda Red Devils ee Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee Manchester United wuxuu ku sheegay:
“Heshiiskeyga kooxda waa la kordhiyay, laakiin kama fikirayo arrinta ku saabsan 3-da sano ee soo socota, sidaas darteed waxaan ka shaqeyn doonaa ujeedooyinka gaaban ee loo baahan yahay in la fuliyo marka hore”.
“Waxaan u maleynayaa inaan dareemeyno xasilooni, waxaana si fiican kaga shaqeyneynaa suuqa kala iibsiga ilaa iyo haatan, sababtoo ah waxaan heysanaa ciyaartoy aad u fiican, balse waxaan wali u baahanahay inaan ka shaqeyno sida aan ku sameyn laheyn hal ilaa iyo labo heshiis kale”.
“Dabcan, mar walba waxaan dooneynaa inaan horumarino shaxda kooxda, waxaan xiriir la sameeyaa milkiilayaasha naadiga, iyo shaqsiyaadka wax falaqeeya, aniga ahaan waxaan xaqiijinayaa in natiijada ay tahay mid aad u wanaagsan”.
“Waxaan heystaa balan qaad dhanka maamulka ah si loo fuliyo dhammaan baahiyaha kooxda”.
Ugu dambeyntii tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu ka hadlay imaatinta xiddigaha Daniel James iyo Aaron Wan-Bissaka ee kooxda Manchester United wuxuuna yiri:
“Daniel James iyo Aaron Wan-Bissaka waxay heystaan awood sare, waxay ku ciyaarayaan dareen halis ah, sidoo kale waxay heystaan raibitaan ah inay horumar sameeyaan isla markaana wax badan ay soo bandhigaan”.
Barcelona oo iska diiday qorshe ay Inter Milan ku damacsaneed iney kala badashaan Nainggolan & Vidal.